အချစ်ဆိုင်ရာ Archives - Page5of 62 - BuzzFeed Myanmar
ယောက်ျား တစ်ယောက် စိတ်ဝင်စားလာအောင် အထာကျကျနဲ့ဆွဲဆောင်နိုင်မယ့်အရာတွေကတော့
အီစီကလီတွေ လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ ဒါတွေနဲ့ အထာကျကျ ဆွဲဆောင်လို့ရပါတယ်။
ချစ်သူ ကောင်မလေး အတွက် အထူးခြားဆုံးနှစ်ပတ်လည်လက်ဆောင်ပေးခဲ့သူ
တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ချစ်မြတ်နိုးကြောင်းဖော်ပြဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ သူတို့ကို အရေးပါသလိုခံစားရစေပြီး ပျော်ရွှင်အောင် ပြုလုပ်ပေးခြင်းပါပဲ။ ချောကလက်နဲ့ ပန်းစည်းတွေလို ရိုမန်တစ်ဆန်ဆန်လက်ဆောင်လေးတွေ ကြိုက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရှိသလို လက်တွေ့ကျတဲ့လက်ဆောင်တွေကိုပဲ ရင်ခုန်တတ်တဲ့မိန်းကလေးတွေလည်းရှိပါတယ်။
Relationship တစ်ခုမှာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် သစ္စာရှိမှုဟာ အရေးအကြီးဆုံး အချက်တစ်ခုပါ။ ဖောက်ပြန်ခြင်းဆိုတာဟာ relationship တစ်ခုလုံးဖျက်ဆီးပစ်နိုင်တဲ့ အရာဖြစ်ပြီး အခြေအနေအမျိုးမျိုးနဲ့ ပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရုပ်ရှင်တွေ၊ ၀တ္တုတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပါ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုတွေ၊ သမီးရည်းစားအချင်းချင် ဖောက်ပြန်နေကြတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကို မကြာခဏမြင်ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။
ဂရိ ဒဿနိကဗေဒ ပညာရှင် ဆိုကရေးတီးသည် မစားမသောက်ဘဲ မှိုင်တွေ ငေးမောနေသောလူငယ်တစ်ဦးကို မြင်သော် အဘယ်ကြောင့် ဤသို့ ခံစားနေရသနည်းဟု မေးလေ၏။လူငယ်…..ကျွန်တော် အသဲကွဲနေပါတယ်။ ဆိုကရေးတီး….အော်…ဒါကဖြစ်တတ်ပါတယ်။အသဲကွဲလို့ နာကျင်တာ မခံစားရဘူးဆိုရင် ချစ်ခဲ့ရတာ အရသာ မရှိသလိုဘဲ။ ဒါပေမယ့်….လူလေးက ဘာဖြစ်လို့ ဒီအသဲကွဲတဲ့ ဝေဒနာကို ချစ်တာထက် ပိုနစ်ပြီး ခံစားနေရသလဲ…?
အန္တရာယ် ကင်းပြီး စိတ်ချရတဲ့ လိင်ဆက်ဆံခြင်း
အန္တရာယ် ကင်းပြီးစိတ်ချရတဲ့ လိင်ဆက်ဆံခြင်း ဆိုတာ….လိင်ဆက်ဆံမှူပြုလုပ်ပေမယ့် သင်နဲ့သင့်အဖော်ကိုလဲကာကွယ်နေ သလို တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ ….လိင်ကတဆင့်ကူးစက်နိုင်တဲ့ရောဂါတွေနဲ့ မလိုချင်ဘဲကိုယ်ဝန်ရတာတွေကို ကာကွယ်တာ လဲ ဟုတ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သုတ်ရည်၊ မိန်းမကိုယ်ကထွက်တဲ့အရည်နဲ့ သွေး တွေကိုရောယှက်ခြင်း မရှိတဲ့ လိင်ဆက်ဆံခြင်းပါပဲ။ စိတ်မချရတဲ့ လိင်ဆက်ဆံခြင်း ကတော့…. သင်နဲ့သင့်ရဲ့ အဖော်ကို ကာလသားရောဂါလို HIV လို အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုး စီပိုးလို ဆီးပူညောင်းကျလို ရောဂါတွေ ကူးစက်စေနိုင်ရုံသာမ က မလိုချင်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ပါ ရနိုင်ပါတယ်။